မောင်ချစ်: ဦးဇင်း ပညာစက္က၏ ဆုံးမစာ
ဦးဇင်း ပညာစက္က၏ ဆုံးမစာ
လူထု မောင်ကာဠု's Photos · လူထု မောင်ကာဠု's Page
မွတ်ဒေါင်း မင်းကိုနိုင်အတွက် ဦးဇင်း ပညာစက္က၏ ဆုံးမစာ
မင်းကိုနိုင်ပြောစကးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်) ကျနော်တို့ ခွတ်ဒေါင်းအလံကို ကိုင်မယ့်လက်ဟာ လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြားပါဘူး ကျနော်တို့ တမျိုးသားလုံး အ တွက် သစ္စာရှိဖို့ရယ် သွေးစွန်းနေတဲ့ လက်မဖြစ်ဖို့ရယ် သန့်စင်တဲ့ လက်ဖြစ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ (မင်းကိုနိုင်)
ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ အခုလိုစကားကိုကြားရတာအရမ်းဝမ်းနည်းမိပ်ါတယ် ဒီလိုစကား ကိုကြားလာလိမ်မယ်လို့လည်းမမျော်လင့်ခဲ့ပါဘူး .လူမျိုးဘာသာ မရွေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတော့ ဘုရားမကြိုက်လို့မပြောပါဘူး ကြိုက်ပါတယ်
သို့သော်လည်း မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှသူရဲ့ သာကီးဝင်မင်းညီမင်းသားတွေကို ဘုရင်ကောသလ မင်းကြိးရဲ့သားတော်စပ်သူဝိဋဋူပ ရဲ့လက်ချက်ကြောင့် သွေးချောင်းစီးမှာကို မလိုလားတဲ့ အတွက်ကြောင့် နေပူကြဲတေ ကွင်လယ်ကြိးမှာအရွက်တွေလုံးဝမရှိဘဲ နေပြောက်တွေဖြာကြနေတဲ့ သစ်ပင်အောက်မှာထိုင်တော်မူုရင်းသူရဲ့ဆွေတော်မျီုးတော်တွေဘက်ကနေရန်ကိုကာကွယ်ခဲ့ဖူးပါသေတယ်
အခု မင်းကိုနိုင်က ဘုရားထက်တောင်းသဘောထားတွေကြီးနေပါလား လူတွေ သိတဲ့အတိုင်ဘဲ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်းမှာ ဧသည်ကိုအပြစ်တင်လေ့ မရှိဘဲ အိမ်ရှင်ကိုဘဲ အပြစ်တင်လေ့ရှိတဲ့အနေအထားတွေ ကဘာသဘောလဲ သူလိုချင်နေတာကဘာလဲ သူအခုလိုပြောလာတဲ့ဆိုကတည်းက တစ်ခုခုလိုနေ လို့ဖြစ်မယ် ဒါမှမဟုတ် အစားလွန်နေလို့ဖြစ်မယ် ၊
အခုဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေအပေါ်မှာဘယ်သူထွန်းညှိလိုက်တဲ့ မီးလဲဆိုတာလည်း တစ်ချက်ပြန်လှည့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်၊ ကိုယ့်လူမျီုး ကိုယ့်ဘာသာကို ကိုယ်မကာကွယ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူကကာကွယ်မလဲ .. မင်းကုိုနိုင်အားပေးထောက်ခံနေတဲ့မူဆလင်တွေကကောဘာသာလူမျိုးမ ခွဲခြားဘူးဆိုတာသေချာလား တကယ်သေချာလားပြောပါသက်သေပြပါ မူဆလင်ကုလားတွေဘာသာလူမျီုးမခွဲခြားဘူးဆိုတာတကယ်သေချာလား ဒကာပြန်စဉ်စားပါ။
ဘာသာနဲ့လူမျီုးကို အစစ်မှန်ခွဲခြားနေတာက ဘယ်သူလဲလေးလေးနက် နက်တွေးကြည့်ပါ ။ အရောင်းတင်ထားတဲ့အဆိပ်သီးကိုမင်းက ချီုးတယ် လို့ပြောမလို့လား မင်းကပိုပြီးတော့ဗဟုသုတရှိတဲ့လူုလေ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံပြိးကြည့်လိုက်ပါ အစွန်ရာက်နေတာတွေကဘယ်သူလဲ.. တကယ်ခွဲခြားနေတာတွေကဘယ်သူလဲသေချာကြည့်ပါ။
သူတို့ယူတဲ့ကောင်မလေးဘဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်လေးဘဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ဘာသာ ကိုမ၀င်မနေရခြီမ်ခြောက်မှုတွ တစ်ဖက်ဘာသာရဲ့ရုပ်ပုံတွေကို
ဖျက်စီးခိုင် တာတွေကို မင်းသိမှာပါ လည်းလှီသတ်တာတွေကိုကောမင်း ကဘယ်လိုပြောမလဲ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာမြန်မာဗုဒ္ခဘာသာတွေ ရဟန်း သံဃံတွေဘယ်လိုနေရတယ်ဆိုတာကောမင်းသိလား ငါတို့ဘာသာနဲ့လူမျီူးကို
ဘယ်လိုအခွင့်အရေးမျီုးနဲ့ထားတယ်ဆိုတာကောမင်းသိလားသိချင် လည်း သိမယ်
မလေးရှားနိုင်ငံလောက်ကိုကြည့်လိုက်ပါ မြန်မာရဟန်းတွေ မလေးကို တရားဟောဖို့သွားကြတယ် ပရိတ်ဟောသွားကြတယ် ပရိတ်ဟောတာ တရားဟောတာကိုတစ်အိမ်းသားလုံးကြားစေချင်လို့အသံဆက်စက် တပ်တာတောင်းတပ်ခွင့်မပေးကြဘူး ဒါကိုမင်းဘယ်လိုပြောမလဲ
ကုလားနိုင်ငံတွေကိုအကုန်ုလုံးကိုကြည့်သူတို့ဘာသာက လွဲ ရင် ဘယ် ဘာသာကိုမှ အခွင့်အရေးမပေးဘူး သူတို့ကလုံးလုံးပေါ် တင်အောင် ခွဲခြားနေပါလျက် မင်းကိုနိုင်ကဘာဖြစ်နေတာလဲ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ် ။ စကားမစပ်. ဘာသာရေး လူမျီုးရေးနဲ့ ဆက်နွယ်လာရင်တော့ အသောကမင်းကြီး ကိုတော့လျံလှန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။
အသာကမင်းပြောခဲ့သောစကားတစ်ချို့ကိုပြောပါရစေ.. အစဉ်အားဖြင့် နံပါတ်(၁)စကားမှာ. အကျွန်ုပ်ပွဲတော်တည်နေသည်ဖြစ်စေ၊
မိဖုရား အဆောင်များကိုရောက်နေသည်ဖြစ်စေ၊မည်သည့်အချိန် မည်သည့်နေရာ ၌ဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူ၏အရေးအခင်နဲ့ပတ်သက်လာ လျင် အကျွနု်ပ်ကိုအကြောင်းကြားရမည်။
နံပါတ်(၄) မှာတော့ ပြည်သူများအတွက်အလုတ်လုတ်ရခြင်းမှ တစ်ပါး တစ်ခြားအလုတ်အကျွနုုပ်မှာမရှိပေ။ ဒီနေရာမှာ ဘုရင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ စကားလေးနက်ပုံ ၁၊ကိုကြည့်ပါ သူဆိုလိုချင်တာ က ဘယ်လောက်ပင် အလုတ်တွေရှုပ်နေပါစေ ပြည်သူလုထုအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အားမနာ နဲ့ မကြောက်နဲ့လာအကြောင်းကြားပါသူကာကွယ်ပေးမယ်လို့ဆိုလိုတာပါဘဲသူရဲ့ရင်ခွင့်အောက်မှာဘဲပြည်သူတွေကိုနွေထွေမှုတွေပေးပါတယ် ။
နံပါတယ်(၄)ကိုကြည့်ပါပြည်သူအတွက်မှတစ်ပါးတခြားအလုတ်ငါမှာမရှိဘူးတဲ့ ဒါကိုစဉ်းစားပါ နုိူင်ငံရေးခေါင်ဆောင်များ မင်းတို့ပြောတာပြည်သူ လုတ်နေ တာကတိုင်းတစ်ပါးသားအတွက်တွေဖြစ်နေတယ် ။
မင်းတို့ပြောချက်တွေကိုမှားတယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး သူနည်းနဲ့သူတောမှန်နေကြတာပါဘဲ.တစ်ဖက်သတ်ကြီးမြန်မာတွေကိုဘဲမကောင်းပြောနေတာတော့လွန်လွန်းပါတယ်။ အခုလိုမင်းကိုနိုင်ဟောပြောချက်တွေ ကိုနားထောင်ကြည့်ချင်အားဖြင့်ရဟန်းသံဃံနဲ့ကျောင်းသားကြားမှာနောက်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာနိူင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။လုတ်ချင်ရင် ကိုယ်တစ်ယောက် တည်သွားလုတ်ပါ ဘာသာတရားကိုတော့အပျောက်မခံနိုင်ဘူး ။
စာရေးရင်းပေါ်လာလိုတစ်ခုလောက်ပြောဦးမယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအောက်မေ့ဖွယ်နေ့မှာဆွမ်းကပ်ခွင့်မရှိတာကောမင်းဘယ်လိုပြောမလဲ နောက် NLDရုံခန်းမှာမြန်မာအမျီုးသမီးတစ်ယောက် ဖျက်စီးလိုက်တာကောမင်းဘာပြောမလဲ?
မင်းကိုပြည်သူဘာကိုကြည့်ပြီးတော့အားကိုးရမှာလဲံ မင်းပြောတဲ့စကး ကိုဘယ်လိုတန်းဘိုးထားရမှာလဲံ မင်းရည်အသွေးတွေဟာ နိမ့်ကျ လာနေပြိနော် ။။
ထိန်းတတ်ပါစေ.. နောက်နောင်းဒီလိုစကားမျီုးကိုမကြားရပါစေနဲ့လို ဆုတောင်းပါတယ်.. ။